Ekathini wahlala ukuphila okujabulisayo nokude, udinga ukunakekelwa okuhle. Futhi amakati amadala kanye nama-kittens amancane adinga ukunakekelwa okhethekile, ngoba amakati amadala nama-kittens anomzimba obuthakathaka. Ungayinakekela kanjani amakati amadala?
Ukunakekela amakati amadala
Emakati, ukuguga kuqala ngeminyaka engu-10. Kwati ngayinye, ukuqala kokuguga kudlula ngabanye, ngoba okuningi kuxhomeke empilweni yakhe. Ngezibonakaliso zangaphandle, ungabona indlela yokuguga. Lapho esekhulile, ikati ilele isikhathi eside, ayibe iselula kakhulu. Ukuzwa kwakhe kwehla, akaphenduli ngokushesha, uma igama lakhe ligama lakhe, liphendula ngokubi nakakhulu emzimbeni wangaphandle futhi liphendula ngokubi kakhulu ukunyakaza.
Ikati ikhuthazelela kanjani ukuguga?
Kuzoxhomeka ekusebenzeni kwakhe kwentsha. Uma ehola impilo esebenzayo, edla kahle, egula kancane, khona-ke isikhathi sokuguga kuyoba lula. Kodwa kumakati aphilile, kunezinguquko ezihlobene neminyaka emizimbeni yazo, ngakho-ke amakati amadala adinga ukunakekelwa okukhethekile nokunakekelwa.
Amakati amadala adla kakhulu kunancane. Ngakho-ke, ukugwema ukukhuluphala, udinga ukunciphisa inani lokudla nokunquma ukudla okunamafutha ekudleni. Uma ikati lakho lidla ukondla, udinga ukuthenga ukudla okwenzelwe izilwane ezindala. Uma ikati idla ukudla okungokwemvelo kuphela, idinga ukuchotshozwa kahle, ngoba amakati amadala ahlushwa izinkinga zinozinyo. Ikati kufanele libe nokufinyelela kokuphuza, amanzi amasha.
Badinga amavithamini, uma ikati engafuni ukuthatha ngendlela ehlanzekile, udinga ukuwafaka emanzini noma ekudleni. Ungamniki amavithamini ngokweqile, kungcono ukuxhumana nodokotela wezilwane, i-avitaminosis iyingozi, kanye ne-hypervitaminosis.
Amakati amadala ahamba ngendlela yokuphila, alala emakhazeni afudumele nokuthula. Akunakwenzeka ukulinda ikati elidala kusukela kumsebenzi omdala. Kodwa kudinga ukuhambisa kancane, ngoba i-hypodynamia isongela ukukhuluphala ngokweqile nezinkinga zomzimba. Kufanele udlale nekati nsuku zonke.
Amakati amadala ahloselwe izifo, futhi ngezinye izikhathi ahlushwa izifo eziningana eziyinkimbinkimbi. Izifo ezingokoqobo zingaba ukuqothulwa, isifo sohudo, ukungabikho komzimba. Kodwa zingabuye zihlotshaniswe nesifo sezinso noma nesifo sikashukela. Ikati kufanele iboniswe kudokotela wezilwane, uzosusa imbangela futhi anikeze ukwelashwa.
Ngisho noma kunjalo, bonisa i-vet uma kukhona iphunga emlonyeni noma ezinye izimpawu ezisolisayo. Kodwa uma ikati iphilile, udinga ukuyithatha njalo emva kwezinyanga ezingu-4 ukuhlolwa kokuvimbela ku-vet.
Amakati amadala amancane kunokuba azinqunde, nezinwele zabo ngokushesha. Ngisho noma ikati liboshwe izinwele ezimfushane, udinga ukulihlanza nsuku zonke. Uma izinwele zingakude, udinga ukusikhipha ikati ngeglavu ekhethekile ekuqondeni kusukela ekhanda kuya emsila. Uma uhlalisa, udinga ukuzwa ikati, uma lingenayo izicubu, amakati amadala angenwa nezifo ezingokwemvelo.
Kulaba asebekhulile, amakati akhathele, ngakho-ke umbhede wekati udinga ukufakwa eduze kwebhethri. Uma ehlobo ikati idinga ukumbeka i-pad yokushisa. Noma ukuthi wayefudumele, ikati ayiphazamisi ngokugqoka ingubo ekhethekile.
Amakati amadala ayacasula futhi angenakuhlukaniswa, ulale ebusuku ukuze uqaphele. Abazizwa benesibindi kakhulu lapho bekhona namakati abanobudlova futhi abasha, aba nomona uma uletha ithole elincane endlini. Lokhu kufanele kuphathwe ngokubekezela okukhulu.
Ngisho noma ikati elidala liziphatha futhi lizwa kahle, lidinga ukunakekelwa okungaphezulu nokunakekelwa. Yichitha isikhathi esiningi naye, umshaye, ukhulume naye ngomusa. Futhi uma enza okuthile okungalungile, akudingeki umjezise kakhulu. Isibonelo, amakati amadala aya endlini yangasese edlule itreyi, kodwa kwenzeka ngoba angenayo isikhathi sokuyifinyelela, hhayi ngenxa yokulimaza, futhi ungabajezisi ngakho.
Ukunakekela ikati endala akuyona umsebenzi olula, kodwa sekuyilungu lomndeni wakho iminyaka eminingana. Udinga ukuba nesineke, futhi unike ikati lakho ukunakekelwa okuqotho, ngoba wayifanele.
Uma ikati selifinyelele asebekhulile, kudingeka lilalele. Kule minyaka yobudala, udinga ukuthula nokuthula, unikeze ngekona elifudumele nelithambile. Kubalulekile ukuthi umbhede uhlale ufudumele, udinga ukutholakala eduze kwebhethri noma eduze kwelanga, vumela ikati ibe nama-couches amabili. Izindawo lapho ikati lakho lithanda ukuya khona, yenza lifinyeleleke. Akasakwazi ukugxuma kusuka eqazini elilodwa kuya efasiteleni, akusekho lokho kuguquguquka. Hlela kahle izitsha ngamanzi nokudla, indlu yangasese yekati.
Uma unendawo enkulu yokuhlala, kunzima ikati ukuhambisa indawo enkulu. Vumela isilwane sakho sibe nesinye noma amakamelo amabili, futhi kuzoba nakho konke akudingayo. Uma ikati lithanda ukuhamba kuzo zonke amakamelo, udinga ukunakekelwa ukuthi konke kuyatholakala futhi kukhululekile. Izifo ezivame kakhulu zamakati endala ziyi-incontinence ye-urinary kanye ne-arthritis, okukuvimbela ukuba ungenele itreyi. Ukuze uqinisekise ukuhlanzeka kwendlu, udinga ukubeka amathreyi emakamelweni ahlukene, khona-ke uzoqinisekisa izimo zokuphila ezivamile zesilwane sakho.
Ungalokothi ulayishe i-cat esekhulile ngemidlalo esebenzayo, kodwa ungakwazi ukuhlela ukuhamba ngosuku olukhanyayo. Ungalokothi uthukuthele uma isilwane silele usuku lonke, futhi ebusuku, siphakamise ebumnyameni, saqala ukukhala izinyembezi, ngoba amakati amadala azizwa elahliwe futhi enesizungu, afuna ukunakwa okukhulu. Ungafundisa ikati ukulala nawe, khona-ke ngeke kusaba khona "amakhonsathini ebusuku".
Yini ongayidla ikati endala?
Uma isilwane sikhula, thintana nodokotela wezilwane ngalokho okumele ukondle ikati elinjalo. Ukudla amakati amadala akufani nokudla okwakunezilwane ezincane, ukudla okunzima futhi okumile kumele kukhishwe, ikati lingakwazi ukuphula amazinyo ngokudla okunjalo, futhi kule nkathi kunzima ukuhlafuna ukudla okunzima. Ngokuvamile ekugugeni, amakati angenasisekelo, ashintshe ukuthanda kwabo, futhi omunye kufanele alungiselele ukuthi isilwane sidinga ukudla okunjalo, okwakunqatshelwe ngaphambili.
Amakati amadala adla njalo nangezingxenye ezincane. Ukuvimbela izifo ezihlukahlukene, abanikazi kumele bahole isilwane kudokotela, ukuze kuhlolwe njalo, amakati asebekhulile anesifo sezinso kaningi. Ngakho-ke, kungenzeka ukulandelela izinguquko zesikhathi esingadinga ukungenelela okuphuthumayo nokukhethekile.
Ekuphetheni, sengeza ukuthi ukunakekelwa kwamakati amadala kudinga ngokubekezela nangothando, ukuze amakati azwe athande futhi anakekele.
Ukubonakala kwekati endlini: kungani ulungiselela?
Okufanele ukondle ikati: ukudla kwesikati
Okuthakazelisayo kakhulu futhi okungavamile ngeziphembu zasemakhaya
Isaladi le-cheese "Etafuleni lokugubha"
U-Nikolai Baskov ngeke ashade noSophia Kalcheva
Izitsha ezivela inyama kanye nezimfihlo zokulungiselela
Yini okudingeka ukwazi ngokulala?
I-sauce eluhlaza okwesibhakabhaka
Indlela yokwenza ukwakheka kwisitayela sodoti
Indlela yokuheha umuntu wangempela?